Inona no The Best Fitantarana hanana tany Soisa | Save A Train
Home > Travel Europe > Inona no The Best Fitantarana hanana tany Soisa
Inona no The Best Fitantarana hanana tany Soisa
ny Karolina Klesta
Fiaran-dalamby Switzerland, Travel Europe
Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 06/10/2020)
Ah, Soisa, firenena tsara sy milamina mipetraka tsara eo anelanelany Italia, Frantsa, ary Alemaina. Tena mendrika ny fitsidihana ny mahita ny antony dia hatrany Soisa laharana iray amin'ireo firenena sambatra indrindra eto an-tany. Ka ahoana ny hevitrao ny rehefa mieritreritra 'Soisa '? Mihevitra aho tampon-tampon'ny oram-panala, fromazy, ary ny sôkôla. Hisy be ny fotoana sy ny sôkôla fondue amin'ny Swiss vacay, fa ho azo antoka mba hampidirana ny ara-kolontsaina rehetra, voajanahary, ary ara-tantara Zava-nisongadina ity firenena ity tsy maintsy atolotra. Avy amin'ny Epic mitaingina fiaran-dalamby sy ny tendrombohitra treks ny valanoranony-nandatsaka maritrano, Soisa manana zavatra mba hanolotra karazana rehetra dia lavitra mandritra ny vanim-potoana rehetra. Ndeha horavako ny sasany amin'ireo tsy maintsy-de los noho ny nankany Soisa.
Travel ny Train
Train Travel dia fomba mahagaga ny mahita ity firenena kely. Fanofana fiara sy ny zavatra mahasolafaka dalana dia mety ho tsaratsara kokoa endriky ny fitaterana any amin'ny tany maro, fa Nandeha lamasinina any Soisa dia malaza traikefa! Ny fiarandalamby dia madio, ara-potoana, ary namakivaky ny sasany amin'ireo indrindra mahatalanjona toerana manodidina eto amin'izao tontolo izao. Fanampin'izany, ny sasany amin'ireo lalana lamasinina mbola tena tsara voaro, manan-tantara fiaran-dalamby fiara izay hahatonga anao hahatsapa toy ny ianao ao antitra sarimihetsika! Ny sasany amin'ireo lalana malaza indrindra dia ahitana ny Jungfraujoch, ny GoldenPass-dalana,, ary ny Glacier Express. Ny sasany amin'ireo lalana dia hita amin'ny Eurail Pass, ary ny sasany izay tsy dia manatitra fihenam-bidy ho Eurail Pass mpihazona. Fiaran-dalamby in Soisa dia tsy mora foana, toy izany, ny drafitra mialoha kely dia afaka manampy anao hamonjeko ny sasany ariary, na ianao nandeha cross-tany na mandray fotsiny ny andro diany!
Basel mba hifangaro amin'ny lamasinina
Bern mba hifangaro amin'ny lamasinina
Lucerne mankany Interlaken amin'ny lamasinina
Zurich mba hampidirina amin'ny lamasinina
Nanketo Alpes eto Soisa dia iray amin'ireo malaza indrindra ririnina fanatanjahan-tena Destinations eto amin'izao tontolo izao. Eritrereto andro teo amin'ny tehezan-tendrombohitra, sy ny alina curled niakatra tamin'ny dite mafana kapoaka sy ny lovia mafana ny cheesy lasopy. Raha toa ianao ka avy amin'ny rivo-piainana mafana sy tsy mbola skied teo anatrehan'i, ririnina nivezivezy toy izany dia mety toa fotsiny toy ny zavatra hitanao ao amin'ny sarimihetsika. Azonao atao ny mianatra ny Ski amin'ny fotoana rehetra eo amin'ny fiainanao ary Soisa no betsaka Resorts izay tonga lafatra ho an'ireo vao manomboka, amin'ny Ski lesona sy ny havoana bunny. Maro Resorts aza manolotra lesona ho an'ny ankizy, manao Soisa ny toerana lehibe ny fianakaviana ho any amin'ny Ski fitsangatsanganana!
Zurich mankany St Moritz Train tapakila
Tapakila fiaran-dalamby ao Zermatt mankany St Moritz
Lyon to St Moritz Train tapakila
Tapakila Basel to St Moritz Train
lava-bato dia tsy ny zavatra voalohany aho, nieritreritra rehefa mieritreritra ny nankany Soisa na. Na izany aza, Soisa maro tsara tarehy sy mahaliana zohy hitsidika, indrindra fa mandritra ny vanin-taona mafana mafana.
Zurich hatramin'ny Zermatt lamasinina
Genève mankany Zermatt Fiaran-dalamby
Bern hatramin'ny fotoan'ny lamasinina Zermatt
Lucerne mankany amin'ny fiaran-dalamby Zermatt
Zohy lehibe io dia manana farihy ary fanasana efitrano ao anatiny izay afaka tena handraisana about 400 ny olona ka nanofa ho an'ny zava-mitranga toy ny buffet fiaraha-misakafo, antoko, sy ny fampakaram-bady. Events any mampiseho DJs, mpandihy, sy ny mpitendry mozika. Afaka maka tantara fiaran-dalamby avy any Vitznau ho toerana tsy manam-paharoa. Ny vohikala ihany alemaina, nefa afaka mampiasa Google Chrome izay hijery tranonkala misy teny vahiny bebe kokoa Travel Info - dia afaka miala ao amin'ny fandikan-teny mandeha ho azy!
St. sambatra Mitandrema
The St. Beatus lava-bato dia tanana nidina iray amin'ireo rafitra zohy manaitra indrindra ao amin'ny firenena. Open amin'ny voalohany herinandro ny March ny voalohany herinandro Oktobra, izany no toerana tonga lafatra ho an'ny olon-tsotra na vondrona mitsidika tandrefana Soisa ao amin'ny mafana kokoa volana amin'ny taona. Afaka hijery ny lava-bato irery, na anjara ao amin'ny iray amin'ireo nitari-dalana Tours izay hitranga tsy tapaka mandritra ny tontolo andro. Amboa dia tonga soa hiaraka anareo ao amin'ny lava-bato ihany koa, fa ianao dia mila mividy ny tapakila fidirana ho azy ireo! Tafiditra tao anatin'ny fidirana vidiny (ihany ho an'ny olombelona, miala tsiny) no fieken-keloka ho any amin'ny tranom-bakoka St Beatus lava-bato, izay hanoro anareo izay tantara, Folklore, ary ny lava-bato Haibolantany ny rafitra!
Ity iray ity dia ho an'ny ririnina. Glacier zohy, fantatra koa amin'ny hoe ranomandry lava-bato, dia zara raha azo idirana ity. Ny fitsidihana io otherworldy lava-bato vita amin'ny ranomandry fahiny dia dia tsy maintsy ho an'izay ski akaikin'ny Engelberg. Fehin'aina ao amin'ny nafana indrindra.- ririnina akanjo sy traipse amin'ny lava-bato ny manga-hued lalantsara natao tanteraka avy amin'ny ranomandry!
Tsidiho ny Iray A Karazana Museum
Tanàna lehibe rehetra dia manana tantara na tranombakoka siansa izay mahafinaritra vaky ny tanàna sy orambe. Na izany aza, toerana sasany efa tena tsy manam-paharoa tranombakoka fotsiny fa tsy tokony ho hita. Ny olona avy avy amin'izao tontolo izao mba hitsidika ny H.R. Geiger tranom-bakoka in Gruyere.
H.R. Geiger dia malaza Soisa mpanakanto izay fantatra tsara manerana izao tontolo izao noho ny fanisàna maty sy ny futuristic zavakanto. Mety mahafantatra Azy toy ny mpanakanto izay nahary ny biby ao amin'ny sarimihetsika Alien. Raha tianao hafahafa, quirky kanto Miroboka ao anatin 'Geiger Museum sy hanaraka azy amin'ny molotov tao amin'ny Geiger nanana lohahevitra fisotroana fivarotana manaraka. Tsy tsara ny kanto? Makà virtoaly fitsidihana ny tranom-bakoka alohan'ny.
Lyon to Geneva Train times
Zurich mankany Geneva Train beses
Paris mankany Geneva Train train
Lucerne mankany amin'ny fiaran-dalamby ao Geneva
Po ao an-tokantrano ny Fondue
Fondue dia iray amin'ireo sakafo malaza indrindra ho avy any Soisa, ary izany no tsy misy loza. Ny olona no mihinana tain fromazy avy amin'ny vilany kaominaly nandritra ny taonjato maro ao amin'ny andrefana miteny frantsay anisan'ny Soisa. Na izany aza, ao amin'ny taona 1930 Soisa Fromazy Union marketed mahery vaika izany lovia na amin'ny firenena sy iraisam-pirenena, manambara izany ny firenena Soisa lovia ny ho fomba iray mivarotra ny firenena overabundance ny fromazy. Ary izahay dia faly izy ireo dia, izay tsy tia ketraka fromazy sy ny mofo? Mpivady ny fondue amin'ny maina divay fotsy, ary aoka ho azo antoka fa tsy ho avo roa heny mandroboka!
Basel mankany Zurich lamasinina
Basel to Geneva Train train
Basel mankany amin'ny fiaran-dalamby Interlaken
Basel mankany Bern fiaran-dalamby
Aza manadino ny tany Chocolate
tonga ny fotoana ho an'ny tena antony andehananao any Suisse – ny sôkôla! Soisa dia tena malaza noho ny sôkôla, ary afaka mahita olona maro teny an-dalana lafo vidy chocolatiers zorony na aiza na aiza eto amin'ny firenena, na izany aza, Zurich no nalaza noho ny sôkôla maro Tours. Misy fitsangatsanganana sôkôla mifanaraka amin'ny teti-bola rehetra! Azonao atao ny maka ny asabotsy maraina nandeha fitetezam-paritra izay tanàna Mitambatra hevitra misongadina tamin'ny sasany ny tsara indrindra tao an-tanàna sôkôla. Azonao andramana maka nitety ny sôkôla kely orinasa, ary traikefa manao anao manokana Baran-tsokola. Fa ny tena asa fahavaratra tarehy, maka sôkôla fitsidihana sambo ny Lindt sy Sprungli orinasa.
Mifampitohy mankany Zurich lamasinina
Lucerne mankany Zurich lamasinina
Bern to Zurich lamasinina
Geneva mankany Zurich fiaran-dalamby
Mandehana any an-tampon'i Eoropa
Ok, ankehitriny, fa efa feno ka sôkôla sy ny fromazy, tonga ny fotoana mba hahazoana mandroso indray! Soisa tendrombohitra dia tsy ho an'ny ririnina tia manao ski ambony! Misy mahatalanjona fahavaratra fiakaran'ny fa afaka mandeha manodidina ny firenena, fa ny faritra Jungfrau tokony ho avo ka eo amin'ny siny lisitry. Ny Jungfraujoch no avo indrindra any Eoropa amin'ny 3,454 metatra (~ 11.330 feet) ary ny fomba fijery tsy tokony ho hita. Misy lalamby izay handray anareo any taona manodidina raha tsy mihaino tsara izay lazainy be, na ianao mandritra ny ririnina mitsidika. Raha toa ianao ka ho an'ny zava-tsarotra jereo ny sasany amin'ireo lalana any amin'ny faritra. Maro ny lalana manana sakafo sy zava-pisotro tsara orinasa teny an-dalana, koa aza manahy, ianao dia tsy mila lava volo izany!
Misy ve ato aminareo amin'ny toerana tena tianao tany Soisa? Aoka isika hahafantatra sy Aza adino, ny tsara indrindra ho namany Sary Order Mampiofana ny tapakila dia Save A Train
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary omeo anay fotsiny ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-experiences-switzerland-winter-summer/ - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / zh-CN ny / ja na / sy more fiteny.
I am traveling the world with my husband Patryk and daughter Mia. My main goal is to inspire others to live their lives to the fullest and never stop chasing their dreams! - Afaka tsindrio eto raha antsoy aho
Nandeha lamasinina, Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Frantsa, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel The Netherlands, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe
Best Train mitaingina Eoropa Nandritra Sunset
Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Travel Europe